Shariif Xasan oo dalka dib ugu soo laabtey, kulan albaabada loo xirteyna la qaatey Sheekh Shariif – idalenews.com
Gudoomiyihii hore ee barlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta dalka dib ugu soo laabtey, ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatey Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii xilkiisu dhamaadey, Kulankaas oo qaatey muddo saacado ah ayaan la ogeyn waxa ay labada shariif ka wada hadleen balse loo badinaayo in ay isbaheysi ka noqdaan arrimaha hadda ee doorashada Madaxweynaha iyo sidii marka kale Shariif Sheikh Axmed dib loogu soo dooran lahaa.
Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa Magaalada Isutaga Imaaraadka Carabta u tagey wadatashi doorashada Madaxweynaha isagoo ay wehliyaan saxaabiibada gaarka ah Mustaf Dhuxulow iyo Milkiilaha Hotel Naasahablood iyo ganacsato kale oo dhamaantood Madaxweyne Shariif Sheikh Axmed isku beel ka soo wada jeedaan.
Lama garan karo waxa dhabta ay ay ka wada hadleen Labada Shariif hase ahaatee waxaa muuqato ololaha Shariif Sheekh Axmed inuu gaarey in uu soo dhoweysto cid kastaa oo uu ku jiro Shariif Xasan oo muddooyinkii dambe is-hayeen oo taageero siin karto sidii mar 2aad loo soo dooran lahaa.
Siyaasiyiin badan ayaa qaba in Shariif Xasan Guuldaradii ka soo gaartey doorashada Gudoomiyaha Barlamaanka ka dib uu waayey intii badneyd 77 xubnood ee uu haystey saacadihii hore ee doorashada. taasna waxaa daliil u ah in Shariif Xasan iyo saaxiibadiisa ay difaaci waayeen gudoomiye ku xigeenkii 1aad ee ay wateen oo ahaa C/weli Sheekh Muudeey oo helay codad ka yar 40 cod. taasoo muujineysa in 37 xubnood ay maalintii 1aad ka dhaqaajiyeen Shariif Xasan oo una leexdeen meelaha kale oo ay dantooda ka arkeen.
Qaar ka mid ah musharaxiinta doorashada Madaxweynaha oo khudbado jeedinaaya